MacOS Big Sur 1 beta 11.4 navoaka ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS Big Sur 1 beta 11.4
Ary io omaly io no nahitantsika ny fomba nanombohan'ny Apple ny kinova beta voalohany an'ny macOS Big Sur 11.4 nefa tsy nanana ny kinova farany 11.3 izay ao amin'ny kinova Release Candidate (RC). Mety ho fahadisoana izany nefa tsia ny orinasa dia namoaka ny kinova macOS Big Sur 11.4 voalohany ho an'ny mpamorona.
Amin'ity kinova vaovao ity dia mbola tsy nahita fiovana be loatra isika na farafaharatsiny toa ny fanitsiana fa tsy kinova vaovao nanomboka teo ny kinova manaraka dia ho tonga amin'ny WWDC ary amin'izany dia tokony hahita fiovana lehibe isika.
Ity karazana hetsika ity dia tsy takatra tsara fa farany nandefa ny kinova beta ihany koa i Apple ka ny mpamorona efa ananan'izy ireo izany eo am-pelatanan'izy ireo mba hikarokaroka miaraka aminy sy hahitana ireo lesoka mety lehibe indrindra.
Amin'ity tranga ity, toy ny tamin'ny kinova beta teo aloha navoakan'i Apple, tsy dia misy data firy amin'ny famaritana kinova, noho izany tsy fantatray hoe firy ny endri-javatra vaovao no nampiana. Amin'ity tranga ity toy ny tamin'ny tranga teo aloha mamporisika anao izahay hanalavitra ireo kinova beta ireo Ho an'ny mpamorona amin'ny solosaina ampiasainay isan'andro fotsiny, satria azon'izy ireo atao ny manimba ny fiasan'ny fitaovana sasany, ny fampiharana na ny toa azy.
Angamba ny fanovana lehibe amin'ny kinova macOS Bic Sur dia ho tonga amin'ny WWDC manaraka, ka andao hiaritra hatrany ary hijery ny fomba tsy ampoizina antsika ny orinasa Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS Big Sur 1 beta 11.4
Apple dia mankalaza ny Andron'ny Tany amin'ny "drafitra"
Miverina amin'ny Mac ny "MagSafe". Amin'ity tranga ity mankany amin'ny iMac